Trafikana fitaovam-piadiana… : vehivavy no mpanaparitaka basy Kalachnikov sy bala | NewsMada
Trafikana fitaovam-piadiana… : vehivavy no mpanaparitaka basy Kalachnikov sy bala
“Fusil d’assaut chinois” (FAC) na basy Kalachnikov vita sinoa iray, miaraka amin’ny “boîte chargeur” miisa roa ary bala 7,62 mm miisa 60. Ireo no sarona tamin’ny lehilahy iray tany Ambalamanarina Ambositra, ny alakamisy teo. Fantatra koa anefa fa vehivavy iray no mpanaparitaka izany fitaovam-piadiana mahery vaika izany.
Araka ny vaovao avy amin’ny zandarimaria, sarona ny vehivavy iray mpanaparitaka basy any amin’iny distrikan’Ambositra iny, ny herinandro lasa teo. Tokony ho natolotra ny fampanoavana omaly izy io, saingy narary ka naiditra hopitaly. Tsy fantatra na mody marary na tena marary fa andrasana zandary any amin’ny hopitaly ilay ramatoa, ary any no tohizana ny fanadihadiana azy, raha ny fanazavana azo.
Roa lahy tratra talohan’izao, ka ireo nanondro ity vehivavy ity. Tratra ny mpitazona basy, ny mpivarotra ny mpanaparitaka, saingy hatreto kosa, tsy hita any anaty fitazonana an-tsoratry ny mpanao fanadihadiana ny olona niandohan’ny basy. Ny marimarina kokoa, avy aiza ny toby mety nivoahan’ireny basy fampiasan’ny mpitandro filaminana ireny? Toby miaramila sa zandary sa polisy?
Ireo fanontaniana ireo no miverimberina matetika amin’ny mpanara-baovao, izay tsy mety ahitam-baliny mahafa-po hatramin’izao. Firifiry ny basy tratra teny am-pelatanan’ny jiolahy izay? Raha ny tany amin’iny faritra nahatrarana ilay ramatoa ity fotsiny, efa telo ity karazam-basy FAC ity no sarona niampy Mas36 iray hatramin’ny fiandohan’ny taona. Basina mpitandro filaminana avokoa ireo, avy aiza ihany?
Avy amin’ny olona ny vaovao
Raha tsiahivina niainga tamin’ny fahatrarana olona roa voasambotry ny zandary tany Ambalamarina, kaominina ambanivohitra Ivato centre, distrika Ambositra, ny 13 avrily lasa teo ny raharaha. Fivarotana sy fitazonana basy tsy ara-dalàna nanenjehana ireo olona ireo. Tra-tehaka tamin’izany ny basy “FAC” iray na koa antsoina hoe Kalacknikov sinoa niaraka tamin’ny “boîte à chargeur” miisa roa ary bala 7,62 mm miisa 60.
Avy amin’ny olon-tsotra ny vaovao nahafantarana momba ireo mpivarotra basy. Tsy nisalasala nanao ny fitsikilovana ny zandary, narahana fisavàna ny tranon’ilay lehilahy izay voatondro fa mitahiry ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo. Namokatra izany asa izany satria tratra tao tokoa ireo fitaovana ireo, ka nogiazana ary nosamborina io olona io. “Mbola maro ny ezaka atao na efa manao ny ainy tsy ho zavatra aza ny zandary ho fampandriana fahalemana ny tany ka eo am-panatanterahana “operation de sécurisation en milieu rural” mihitsy izy ireo amin’izao”, hoy ny zandary.